Moovly: Idizayini yamavidiyo we-Animated, Izikhangiso ze-Banner noma i-Infographics | Martech Zone
Moovly: Idizayini yamavidiyo we-Animated, Izikhangiso ze-Banner noma i-Infographics
NgoMsombuluko, Agasti 12, 2013 Douglas Karr
Umklami wethu ubesebenza kanzima, usanda kukhiqiza ifayili le- ividiyo egqwayizayo ye-Right On Interactive. Ngaphandle kobunzima bokugqwayiza, ukunikeza amanye amavidiyo kuthatha amahora ukusebenzisa amathuluzi wedeskithophu ajwayelekile. Moovly (okwamanje eku-beta) unethemba lokukushintsha lokho, ukuhlinzeka ngengxenyekazi evumela noma ngubani ukuthi adale kalula amavidiyo opopayi, izikhangiso ze-banner, izethulo ezisebenzisanayo nokunye okuqukethwe okuphoqayo.
I-Moovly iyithuluzi elilula eliku-inthanethi elikuvumela ukuthi udale okuqukethwe okugqwayizayo ngaphandle kokuba yingcweti yemultimedia. Ukudala okuqukethwe kwemidiya okunothile manje sekulula njengokudala amaslayidi e-PowerPoint. I-Moovly kulula ukuyisebenzisa futhi yenza wonke umuntu abukeke njenge-multimedia pro.
Izibonelo zokusetshenziswa kusuka ku- Moovly isayithi:
Amavidiyo Wopopayi - Sebenzisa i-Moovly ukudala ividiyo ehlanganisiwe, isethulo somkhiqizo, okokufundisa okuhehayo noma indlela yokwenza ividiyo ngendlela elula neqondile. Faka izwi, umsindo nomculo futhi uvumelanise konke usebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo sesikhathi. Shicilela ividiyo yakho ku-Youtube, Facebook, uyibeke kuwebhusayithi yakho noma uyilayishe ukuze uyisebenzise ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Isethulo 3.0 - Khohlwa ngamaslayidi. Gxila esihlokweni sakho bese ungeza okubonwayo ngokulandelana okuphoqelela okusekelwa izinguquko ezikhangayo nemifanekiso eheha izilaleli zakho. Sekela izethulo zakho ngendlela entsha ngokuphelele kodwa elula. Guqula kalula isethulo sakho sibe yividiyo futhi okuphambene nalokho.
Bonisa izikhangiso - Ukuheha ukunaka ngokunyakaza: dala isibhengezo sakho, isibalo esikhulu noma ezinye izikhangiso zokubonisa ezenzelwe wena noma amanye amawebhusayithi. Dizayina amaphromoshini amahle we-animated, izimemezelo noma eminye imilayezo yanoma yisiphi isikrini: ithelevishini, i-narrowcasting, i-smartphone, ithebhulethi,… Phinda ikhophi yenguqulo eyodwa ukwenza ukuhlukahluka okuningi okuthandayo, nakwezinye ubukhulu.
I-infographics esebenzayo - Sekela indaba yakho ngokuboniswa kwemininingwane yolwazi, izitayela, izibalo noma enye idatha. Sebenzisa amashadi, amamephu, imifanekiso nokunye okubonakalayo okumibalabala ukwethula imininingwane yakho, ucwaningo noma imibiko. Yenza i-infographic yakho isebenzisane: vumela izithameli zakho zithole imininingwane eyengeziwe zisebenzisa i-mouse-over noma izenzo zokuchofoza, izigelekeqe nokunye ukuxhumana.
Isiqophi Ukugunda - Sebenzisa i-Moovly ukudala amavidiyo wakho womculo. Faka ithrekhi yomculo we-mp3, engeza izithombe, umculo, ukugqwayiza noma izingcezu zevidiyo. Vumelanisa ukugqwayiza kwakho kusigqi nokuthekelisa indalo yakho ukuze wabelane ngakho nabangani bakho.
Ama-E-amakhadi - Zakhele ama-e-amakhadi wakho we-animated noma izimemo eziku-inthanethi zanoma yisiphi isenzakalo. Mangaza abangani bakho nomndeni wakho ngomlayezo wokuqala noma isimemezelo. Hlanganisa izithombe, ukugqwayiza nombhalo ube yisimemo esiphoqayo esiku-inthanethi noma izifiso. Shicilela indalo yakho ku-Facebook, Youtube noma… ku Moovly!
Tags: i-infographic egqwayizayoividiyo egqwayizayoAnimationipulatifomu yokugqwayizai-infographic esebenzayoi-moovly
Aug 12, 2013 ku-10: 06 AM
Hawu, ngizohlola lokhu ngokuqinisekile.